Naqshadeynta + Suuqgeynta - VANTAGE | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Ardaydu waxay bartaan xirfadaha isdhaafsiga, garaafka iyo soosaarka iyo sida loogu dabaqi karo adduunka ganacsiga. Hadafka koorsadani waa in la isku keeno qaab iyo shaqo si loo barto loona abuuro 2D iyo alaabada 3D oo loogu talagalay inay si hal-abuurnimo isugu geeyaan alaabada iyo warbaahinta dijitaalka ah. Ardeydu waxay wax ka bartaan doorsoomayaasha suuqgeynta ee saamaynta ku leh badeecada iyo sida si farshaxan leh loogu qaabeeyey sawirada muuqaalka iyo alaabada ay ku guuleystaan suuqa.
Ardaydu waxay la shaqeeyaan meheradaha maxalliga ah, kuwa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba markay bartaan sidii ay u baran lahaayeen barnaamijyada sida Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator. Adoo door hoggaamineed ka qaadanaya qorshaynta, naqshadeynta iyo u bandhigida shaqada asxaabta iyo macaamiisha, ardaydu waxay u shaqeeyaan sidii la-tashi qaabeyn iyo suuq geyn inta lagu gudajiro howlaha. Barnaamijkan waxaa lasiiyaa dhalinyarada iyo waayeelka.
Suuqgeyn I iyo II (hal ganacsi oo dooro ganacsiga)
Naqshadeynta Sawirka iyo Soosaarka I iyo II (hal dhibic oo ku jirta Farshaxanka)